राम्रो तरिकाले व्यवस्थित र बालबालिकाबाट विद्यालयमा संक्रमण संग
बेरोजगार बिना प्रचार गर्नुहोस् - तपाईंको बच्चालाई विद्यालय सुरु गर्नु भन्दा देनदारहरूको आदी पाउनुहोस्
स्कूलमा पहिलो पटक - निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँसँग पर्याप्त आराम छ
छ वर्षको उमेरमा, जीवनको गम्भीरता सुरु हुन्छ: बच्चाहरू नामांकनको समय नजिक पुग्न यी शुरुवात दिनहरुमा यी वा यस्तै वाक्यांशहरू सुनेका थिए।
बालबालिकाबाट विद्यार्थीलाई - एक सुचारु संक्रमण सफल हुन्छ
हालका वर्षहरूमा प्राथमिक स्कूलको पाठ्यक्रमले प्रायः परिवर्तन गरेको छ र समर्पित शिक्षिकाले कक्षामा धेरै प्लेलिस्ट तत्वहरू समावेश गरेर जानबूझेर डरलाग्दो कमजोरीमा बच्चाहरूलाई विद्यालयमा सुरू गर्न सजिलो बनाउन खोज्दैछन्। धेरै ठाउँहरूमा बालबालिका र प्राथमिक स्कूल बीचको सहयोग पनि सुधारिएको छ।
यद्यपि, धेरै पूर्वस्कूलका छोराछोरीहरूले स्कूलको आनन्दको रूपमा उनीहरूको नयाँ भूमिकाबारे सोच्दै महसुस गर्छन्। आखिर, जीवनको यो नयाँ चरण यसको साथमा धेरै महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू र सबै भन्दा माथि, कर्तव्यहरू ल्याउँछन्।
शिक्षकों संग एक साथ, अभिभावक को रूप मा तपाई को बालवालिका र स्कूल को बीच को रूप मा सम्भव को लागी संक्रमण बनाउन को लागि र नयाँ चुनौतिहरु को लागि राम्रो तरिकाले आफ्नो बच्चा तयार गर्न प्रयास गर्नुपर्छ।
नर्सरी विद्यालय पदोन्नति र स्कूल सिकाउने प्रक्रियाको बीचमा ठूलो भिन्नता यो छ कि अचानक विद्यालयमा बच्चा धेरै अधिक जिम्मेदारहरू छन्। यो दिन भर, हल्ला र रम्प गर्न सक्षम भएको छ र अचानक 45 फोनमा केहि मिनेटको लागि रहन्छ, सधैं होमपेज राख्न र सफा पत्र लेख्न।
धेरै ताजा व्यक्तिहरूको लागि यो झटका हो। यसैले, यसले पहिले नै देनदारतामा नामांकन गर्नु अघि अचम्मको बच्चाहरु लाई सम्भव बनाउँछ। यो मतलब छैन कि साना व्यक्तिहरूले हरेक दिन कुनै पनि लिखित वा गणना अभ्यास गर्न पर्छ। त्यहाँ अन्य सम्भावनाहरू छन्।
स्कूलको जीवनको सुरुवातको रूपमा स्कूलको शुरुआत
उदाहरणका लागि, यदि तपाईंको बच्चाले जिमनास्टिक्स क्लब वा संगीत विद्यालयमा भाग लिन चाहानुहुन्छ भने, तिनीहरू पहिला गैर-बाध्यकारी परीक्षण पाठमा भाग लिनुपर्छ। त्यसपछि यो आफैले निर्णय गर्न सक्छ कि अर्को सहभागी योग्य छ वा छैन। तर: एक पटक तपाईंको बच्चाले निर्णय गरेको बेला, त्यो बाटोमा रहनु पर्छ - विशेष गरी यदि वार्षिक शुल्क पहिले नै भुक्तान गरिएको छ।
यद्यपि रोजगारीको जीवनमा हरेक परिवारमा परिस्थितिहरू छन् जहाँ पूर्वस्कूलरले केही कर्तव्यहरू लिन सक्छन्। उदाहरणका लागि, आफ्नो छोरी दिनुहोस् वा कचौरामा लैजाने, बेकरीमा जान, वा तालिका नियमित रूपमा बिर्सनु। यसले धेरै पक्षीहरूलाई एक पत्थरको साथमा मार्नेछ, किनभने तपाईंको बच्चाले मात्र डोऱ्याइको भावना विकास गर्दैन तर गम्भीरतासाथ पनि महसुस गर्दछन्। यसको अतिरिक्त, तिनको आत्मविश्वास बलियो हुन्छ।
यसको अतिरिक्त, सँधै तपाईंको बच्चालाई सोच्न, हेर्नुहोस् र सुन्न प्रोत्साहन दिनुहोस्। प्रशिक्षकहरूले यात्राको बारेमा के गरे? ग्रीष्मकालीन पार्टीमा प्रदर्शनको लागि कुन वेशभूषा चाहिन्छ? तपाइँका छोराछोरीले दुई उत्कृष्ट मनोरञ्जनहरू बीच विवाद समाधान गर्न कुन विकल्पहरू हेर्छन्?
त्यसो गरेर, तपाईले ध्यान केन्द्रित गर्न र एक समाधान-आधारित तरिकामा सोच्ने क्षमतालाई पनि बढावा दिन्छ। यी दुई योग्यताहरू विद्यार्थीहरूले तुरुन्तै आवश्यक हुन्छन्, किनकि यसले सिक्किङ्ग प्रक्रियाहरु लाई सुविधा दिन्छ।
साथै महत्त्वपूर्ण: तपाईंको बच्चालाई सकेसम्म यथार्थ प्रयास गर्न र आफ्नो स्वतन्त्रता बढाउन दिनुहोस्। उदाहरणको लागि, जब यो विद्यालय आउछ, यो एक्लै लुगा लगाउन, आफैलाई संगठित गर्न र यसको व्यक्तिगत सामानको ख्याल राख्नुपर्छ।
विशेष गरी विद्यालयको रूपमा पहिलो हप्ता छोराछोरीको लागि थकित हुन्छ। न केवल तपाईं सिक्न प्रयोग गर्न को लागी छ, तपाईं अज्ञात इमारत वरिपरि तपाईंको बाटो पत्ता लगाउनुहुन्छ, मास्टर बाटोमा मास्टर र आफ्नो समुदाय कक्षा समुदाय भित्र लैजानु पर्छ। गृहकार्य दोहोरो छ।
विद्यालयको शुरुवात सँगै आमाबाबुको साथ हुनुपर्छ
यस समयमा, आमा वा बुबाको रूपमा, तपाइँ निश्चित हुनुपर्दछ कि तपाईंको बच्चालाई निद्रा हुन्छ र दिनको समयमा रिकभर गर्न समय छ। वी
दोहोर्याउने नियुक्तिहरूको संख्या कम्तिमा कम राख्न को लागी प्रयास गर्नुहोस् ताकि तपाईंको छोरा वा छोरी साथी भेट्न वा आफ्नो कोठामा बस्न सक्दछ।
आफ्नो बालबालिकामा दबाब नदिनुहोस् यदि शैक्षिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ। धेरै प्रथम ग्रिडले शिक्षकको प्रशंसाको लागि एक-अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्छन् र आफैलाई पहिले नै तनावमा राखे। आफ्नो गृहकार्यलाई उनीहरूको गृहकार्यमा सहयोग गर्न प्रोत्साहन दिनुहोस्, तर उनीहरूलाई स्वीकार गर्नुहोस् यदि उनीहरूले तपाईंको मद्दत अस्वीकार गरे।
साथै महत्त्वपूर्ण छ: यदि तपाईंको बच्चाले गल्ती गर्दछ भने, तिनीहरूलाई सही नगर्नुहोस्। अन्यथा, शिक्षकहरूले तपाईंको बालबालिकाको कार्यक्षेत्र स्तरको दुरुपयोग गर्नेछन्, र नतिजाहरू धेरै पहिलो परीक्षणमा निराश हुनेछन्।
यदि तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईंको बच्चा अचेल छ, कक्षा शिक्षकको साथ कुराकानी को लागी हेर्नुहोस्। पहिलो ग्रिडरले 30 भन्दा बढी आफ्नो होमवर्कमा 40 मिनेटसम्म खर्च गर्नुपर्दैन।
रंग Nessie बाट Loch Ness
बैठक कोठाबाट पुनःस्थापना गर्नुहोस्
हामी किन ठाउँ बाट प्यासी पाउनेछौँ? बच्चाहरु प्रश्न